MBP: Bixiye-Blogging Micro iyo hab maamuuska | Martech Zone
Jimco, Juun 13, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dadyohow waxaa laga yaabaa inaad wax ka aqrisay tiff yar inta udhaxeysa Robert Scoble iyo Twitter. Scoble wuxuu la kulmay Twitter wuxuuna xaliyay xaalada. Qaar ka mid ah dadka waawayn waxay ka hadlayaan qaab ganacsi oo leh adeegyadan yar-yar ee internetka lagu qorayo isticmaalayaasha caanka ah ayaa bixiya adeegga.
Runtii waxaan jeclaan lahaa in aan soo gudbiyo soojeedin kafiican taasna waxaa loogu talagalay shabakadaha shabakadaha yar-yar ()Saaxiibtinimo, Tumblr, Jaiku, TwitterPownce, Seesmic, Brightkite, Plurk, qixi, iwm.) Go'aaminta Hab-maamuuska Micro-Blogging. Dhammaan adeegyadani waxay markaa noqon karaan Bixiyeyaasha Micro-Blogging.
Mobilada, fiidiyaha, dhawaaqa, iskuxirayaasha, lifaaqyada, sawirada, iyo fariimaha dhamaantood waxay kujireen hal borotokol nadiif ah. Awoodda 'in la raaco' waxaa laga yaabaa in lagu simo dhammaan meheradaha. Barxad kastaa way ka duwanaan kartaa tan kale qalabkeeda adeegsigooda iyo is dhexgalka, laakiin culeyska iyo caannimada dadka kale ayaa bilaabi kara in la kala firdhiyo. Bixiye kasta xitaa ma aha inuu taageero warbaahinta kala duwan. Tani waxay bixin doontaa waqti-kordhin dheeri ah oo isticmaaleyaashu ay u janjeeri karaan xagga codsiyada macmiilka ee ay sida wanaagsan u jecel yihiin.
Ma ahan qaab ugub ah - waxay la mid noqon laheyd sida Bixiyeyaasha Adeegga Internetka ay ku sameeyeen email. Waan ka faa'iideysan karaa macmiil kasta oo aan jeclahay oo guud ahaan waxaan la xiriiri karaa qof kasta oo ku jira liistada xiriiriyaha.
Marka halkaa waxaad ku haysataa - waqti loogu talagalay Borotokoolka Micro-Blogging ee warshadaha! Oo aan u yeerno bixiyeyaasha Micro-Blogging Providers. Aan u fududeyno kuwan macaamilka!
Jun 13, 2008 saacadu markay ahayd 11:59 AM
XMPP wuu fiicnaan lahaa.
Jacaylka fikraddan, waxaan la yaabanahay haddii ay waligeed dhici doonto inkastoo?
Blogging-ka Micro waa inuu ahaadaa adeeg isku dhafan oo ay isticmaaleyaashu u isticmaali karaan inay u adeegsadaan fariin qoraal ah oo ballaaran (si ay u cusbooneysiiyaan dhammaan asxaabta), heerka xaaladda ee shabakadaha bulshada (sida shaqada xaaladda FaceBook), iyo xitaa saxiixa iimaylka.
Jun 16, 2008 saacadu markay ahayd 1:46 AM
Waxay u egtahay fikrad aad u fiican, marka laga reebo ugu yaraan hal qof oo mid kasta oo ka mid ah dhowr ka mid ah shirkadahaas runti waa inay la wareegaan hoggaanka si ay u dhacdo. Waxaa laga yaabaa inaan la ciirciirayo, laakiin waxaan arkay waxyaabo badan oo la xiriira oo dhici kara laakiin ma aanan arag sidaas uma arko tan oo kale, ugu yaraan ilaa iyo inta behemoth sida Google ah uu dejinayo borotokoolka oo leh "qof walba wuu raacayaa, ama haddii kale. ” Waan ka xumahay inaad taban tahay, laakiin mar qaniinay laba jeer xishood.
BTW, ma hubo inaad ogaatay laakiin ugu dambeyn waan badalay blogkayga ilaa WordPress ka dib iskii isu-xilqaamay oo ku dhowaad sannad ah. Waxaan ahaa sugitaanka waqtiga (iyo dhiirrigelinta) si aan ugu dambayntii uga beddelo barnaamijkeygii hore oo dhib badan ku noqday inay u qalanto. Hadda waxaan sameyn karaa wax ka badan kaliya inaan ka faalloodo bartaada iyo kuwa kale; Runtii waan bilaabi karaa blogging markale!
FYI, kaagu waa kaliya mid ka mid ah seddex (3) baloog oo aan ku taxay inay si firfircoon ula socdaan hada. Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan ku daro qayb kale oo ah "blogroll"Blogs waan raaci lahaa haddii aan waqti heli lahaa!”Dhammaan baloogyada kale ee waaweyn ee halkaas ku jira. '-)
Jun 16, 2008 saacadu markay ahayd 8:42 AM
Runta haddii loo sheego, Ma aanan sameynin aqrinta badan ee baloogyada (Waan jeclahay) sida ugu habboon. Mararka qaarkood shaqadu way ka hor tagtaa;).
Waan ku qanacsanahay taageerada oo waxaan ku soo dhaweynayaa bogga, Mike!
Run ahaantii anigu ma arko sida qof u haysto waqti uu ku akhriyo boggag badan. Markii aan nafteyda u oggolaado inaan tago muddo aanan waxba qaban oo aan markaas aad uga xumaado naftayda markaan sidaas sameeyo. Ka dib haddii aan maareeyo in aan nafteyda u oggolaado in aan ku nuugo "wadahadal" (akhri "dood") taasi waa marka ay runti noqonayso waqti xaddidan. Ma garanayo sida dadka sida faa'iidada leh loogu shaqaaleeyaa u maareeyaan inay waqtiga u helaan.
Laakiin mid ka mid ah sababaha aan u sii wado inaan aqriyo taada ayaa ah in, mowduucyada aniga i xiiseynaya, kaagu uu aad uga badan yahay "calaamadda" marka loo eego saamiga "buuq" marka loo eego bogagga intarnetka badankood. Kudos.